Kitra an’olona 7 - ZOARA FANANTENANA
15. avril, 2013Non classé Commentaires fermés sur Kitra an’olona 7
Ekipa 6 avy amin’ireo faritra 7 ao amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo no miatrika ilay fifaninanana baolina kitra lalaovin’olona 7 karakarain’ny sokajy Fanatanjahantena ary nampitondraina ny lohevitra hoe “Mizara Fitiavana” ny 13 sy 14 aprily eny amin’ny kianjan’Ankatso. Ireto avy ireo faritra fito ireo: Cite Ambohipo, Ambohipo Tanana, Ambohibato-CUR Ambohipo, A
mpahateza-Andohaniato, Andohan’Imandroseza-Ambatoroka-Tsihadana, Ambolonkandrina-Antsahamamy, Ankatso1 ary ireo mpivavaka ivelan’ireo. Ny faritra fararoa irery no tsy nahafeno ekipa ary notsinjaraina tamin’ireo faritra hafa. Ny alakamisy 11 aprily teo ny fivoriana arateknika. Nosokafana tamin’ny filaharanan’ireo ekipa mpandray anjara ny fotoana ny sabotsy maraina.
Nisy koa ny fifaninanana ho an’ny sokajy vehivavy nialoha ny famaranana ny alahady 14 aprily tolakandro nihaonan’ny ekipan’ny Dorkasy sy ny Antoko mpihira vehivavy. Marihina fa efa nisy ny fifaninanana hafa natao tamina taranja hafa toy ny tsipy kanetibe isaky ny volana aprily ary ny baskety kosa tamin’ny taondasa. Ny baolina kitra indray amin’ity taona ity izay tafiditra indrindra koa amin’ny fanombohana ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny sokajy fanatanjahantena. Mbola hitohy ny fankalazana ka amin’ny volana novambra ny rodorodom-panantanjahantena.